China China Factory Cheap N'ogbe lashes OEM Ụgha Mink nku anya na -ere 25mm ụlọ ọrụ na -emepụta | Weiti
Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ China dị ọnụ ala na -adọkpụ OEM ụgha mink nku anya 25mm
1, KRYSTAL style lashes ejiri aka mee
2, 100% ntutu mink dị okomoko
4, Dị nro na ntụsara ahụ itinye
1,A na -eme mink kalocils lashes, nke a na -ebubata na Siberia n'oge oge molt kwa afọ. Mgbe ọgwụgwọ oke okpomọkụ, nchekwa na asepsis. 100% enweghị obi ọjọọ. Zuru oke na ọkụ dị ka ikuku, eke, na -egbu maramara.
2,Ogologo 25mm. Nku anya dị ogologo gbagọrọ agbagọ nwere mmetụta ọkụ iji gbatịa anya gị. Ọzọkwa, mụbaa ogologo na olu, si otú a na -agbakwunye omimi n'anya gị. Dị nro, dị fechaa, dị mfe ịgbakwunye ihe nkiri zuru oke na anya ike gị. Kwesịrị ekwesị maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, abalị ụmụ agbọghọ na oriri, wdg.
3,Nku anya mink 3D niile sitere na Kalocils bụ nke ejiri aka mee ma ghara ịwụfu. Ejiri akwa agwaetiti nke oke osimiri mee ihe, hypoallergenic, na nro dị oke mma. Ị gaghị enwe mmetụta nke ukwuu. Ọ dị mfe ihulata iji dabara nkuchi anya gị, ọbụlagodi akụkụ dị n'ime.
4,Enwere ike iji lashes 3D mink anyị ruo ugboro 20 na nlekọta kwesịrị ekwesị. Ọ dị mfe iyi ma dị mfe iwepu. Ogologo ya na ịdị mma ya ga -eme ka ọ dị gị ka ị na -enweta uru ego gị. Ọ naghị adịrị mfe ịdọpụ ya na eriri adịghị ogologo.
Nke gara aga: China Eyelash Factory OEM ODM N'ogbe enweghị obi ebere 25mm Mink ụgha lashes
Osote: Ọkụ ọkụ 3D Mink nku anya N'ogbe 100% ezigbo Siberia Mink Lashes
Ntughari anya Mink ahaziri
mink ntutu anya
Mink ntutu anya 25mm
Mink nku anya na -ere 25mm
Lask Mink N'ogbe
Nnukwu ọnụ ala Price Label warara lashes 25m ...
Ahaziri 5d 100% Mink lashes warara 25mm Long ...
China ntutu ntutu Factory OEM ODM N'ogbe obi ọjọọ ...
Igbe igbe ahaziri onwe ya n'uju ...
China nku anya emeputa nnukwu ụgha nku anya ...
Anya anya, mink lashes, eyeliner, egbugbere ọnụ, Mgbatị ntutu anya, Ndị na -ere ntutu anya,